Moha Farah Oo La Saadaalinayo In Ay Noqoto Madaxweynaha Dawlad Deegaanka Soomaalida Ee Itoobiya – somalilandtoday.com
Moha Farah Oo La Saadaalinayo In Ay Noqoto Madaxweynaha Dawlad Deegaanka Soomaalida Ee Itoobiya
(SLT-Hargeysa)-Dr. Moha Farah Jire ayaa la sheegay inay safka hore kaga jirto tartamayaal la saadaalinayo inay qabtaan jagada madaxtinimada dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya, isla markaana noqoto gabadhii ugu horreysay taariikhda ee u tartanta madaxweynenimada gobolka Soomaalida Itoobiya.
Sida lagu baahiyey shalay Idaacada Dalsan, oo tilmaamay in warkaasi ay u xaqiijiyeen xoga ay ka heleen Addis Ababa iyo Jigjiga. Iyada oo gobolka Soomaalida Itoobiya, muddooyinkii u dambeeyey ay warbaahinta caalamka haysteen isbedelada ka dhacayey, kuwaasi oo uu la wadaago guud ahaan dalka Itoobiya, tan iyo markii uu xilka qabtay raysal wasaaraha dalkaas Dr. Abiy Ahmed.
Sida ay sheegtay Idaacadda Dalsan, ilo wareedyo laga soo xigtay magaalooyinka Jigjiga iyo Addis Ababa ayaa lagu sheegay inay safka hore kaga jirto tartamayaasha buuxin doona jagada madaxweynaha DDSI, Dr. Moha Farah Jire, kana dhigi doonta haddii ayu ku guulaysato gabadhii koowaad iyo madaxweynahii ugu da’da yaraa ee noqda Madaxweynaha DDSI.
Sidoo kale warbaahinta Itoobiya ayaa todobaadkii la soo dhaafay saadaalinayey in Dr. Moha Farah noqon doonto Madaxweynaha DDSI.